မြန်မာကျပ်ငွေမာနေရခြင်း brain stormimg | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Money & Finance » မြန်မာကျပ်ငွေမာနေရခြင်း brain stormimg
မြန်မာကျပ်ငွေမာနေရခြင်း brain stormimg
Posted by padonmar on Jun 14, 2011 in Money & Finance, Think Tank | 23 comments
ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း ဒေါ်လှတွေ ရော FEC ,Earning တွေရော ဒလိမ့်ခေါက်ကွေးကျနေလို့ exporter တွေ ဒေါ်လှစားတွေသာမက ကြွေးယူပြီး ပြည်ပထွက် ငွေရှာကြတဲ့သူတွေပါ အော်ညည်းနေကြပါတယ်။ အကြောင်းတွေတော့ အမျိုးမျိုးကြားရပါတယ်။အိမ်ခြံမြေ လေလံငွေရှင်းဖို့၊ကျောက်ပွဲလေလံငွေတွေဝင်လာလို့ ၊ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရောင်းရငွေတွေ စုပုံလာလို့၊တရုတ်ကချေးငွေရလာလို့စသည်စသည်…..
အဲဒီထဲမှာ အခုအသစ်ကြားမိတာကတော့ US& China Big Game Play တာဖြစ်ပါသတဲ့၊
China Yuan က ဈေးတအားမာနေတာကို US က ချခိုင်းလို့မရတော့ ဒေါ်လာငွေပျော့အောင်လုပ်ပါတယ်တဲ့။ဒီအခါ တရုတ်ပြည်ထဲက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ တွက်ခြေမကိုက်လို့ နီးစပ်ရာ မြန်မာ။ဗီယက်နမ်စသည် ပြောင်းရန်ပြင်ပါတယ်တဲ့။
အဲဒီလိုမပြောင်းနိုင်အောင် တရုတ်ကြီးက မြန်မာမှာလည်းငွေမာသွားအောင် ငွေထုတ်ချေးပေးလိုက်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံခြားက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ မကိုက်အောင် တနည်းသူ့နိုင်ငံကထွက်မသွားနိုင်အောင် play တာပါတဲ့။
ရွာထဲမှာ think tank တွေများတော့ ဖြစ်နိုင်ခြေ နဲ့ ရှေ့အလားအလာလေး ဆွေးနွေးပေးကြပါအုံး။
ကျုပ်ကလည်း ဒီအကြောင်းကို သောက်ကျိုးနည်းအောင်စိတ်ဝင်စားနေတာ
ပေးစရာ အရက်အကြွေးဘဲရှိတယ် :D
တရုတ် ငွေကြေး ဖောင်းပွ မှု သုံးနှစ် အတွင်း အဆိုးဆုံးအခြေအနေရောက်ရှိ
တရုတ် စားသောက် ကုန် ဈေးနှုန်းများ သည် မေလ က ထက် ၆.၆ ရာခိုင်နှုန်းထပ်မံ မြင့်တက်သွားပြီး
ယနေ့ မနက် ထပ်မံ ရရှိသည့် သတင်းများ အရ တရုတ် ယွမ် ငွေကြေး တန်ဖိုး ထပ်မံ ကျဆင်း ကာ
စားကုန် ဈေး နှုန်းများ မြင့် ဆက်လက်မြင့် တက်နေသည် ဟု သတင်း ရရှိသည်။ တရုတ် နိုင်ငံတွင်း သုံး ငွေကြေးတစ် မျိုး ဖြစ်သည့် ယွမ် ငွေကြေး ဖောင်းပွ မှု ကြောင့် တရုတ်
နိုင်ငံ ထုတ် ကုန် ပစ္စည်းများ ဆက်လက် ဈေးမြင့် တက် ဆဲ ရှိ နေပြီး ယခု ဖောင်းပွ နေ သည့်
နှုန်းထား ကို ဆက်လက် ထိမ်း သိမ်း နိုင်ခြင်း မရှိလျှင် တရုတ် စီးပွား ရေး သည် ပြိုလဲ နိုင်သည်
ဟု နိုင်ငံ တကာ ငွေကြေး ရံပုံငွေ အဖွဲ့ IMF က တရုတ် ပြည် ကို အကြံပေး ထားသည်။
မတ်လ လယ်က မြန်မာ ငွေ ၁၀၀၀ ကျပ် ကို တရုတ် ယွမ်ငွေ ၆.၆၀ ခန့် ရရှိခဲ့ သော်လည်း ယခု
၇.၂၀ ခန့်ရရှိ သည် ဟု မူဆယ် မြို့ မှ ကုန် သည် တသ်ဦး က ပြောသည်။
တရုတ် နိုင်ငံ တွင်း ထုတ် လုပ်သည့် ကုန် ပစ္စည်း တစ်ချို့ ၏ အရည်အသွေး ညံ့ဖျင်း မှုများ နှင့်
နိုင်ငံ တကာ စီးပွားရေး တုံ့ ဆိုင်း နှေးကွေး မှု များ ကြောင့် တရုတ် ၏ ပြည်ပ ၀င်ငွေ ကျဆင်းမှု
ပေါ်ပေါက် လာရခြင်းသည် စီးပွား ရေး နှေး ကွေး စေသည့် အချက် ဖြစ်သည် ဟု ဘောဂ ဗေဒ
ပညာ ရှင် များ က ထောက် ပြကြသည်။
” တရုတ် စီးပွားရေး နှင့် ရင်းနှီး မြုပ်နှံ မှု ဆိုင်ရာ အချက် အလက် အမှန် တွေ ကို ဖော်ထုတ်ဖွင့်
ချမှု တွေ ကြောင့် တရုတ် စီးပွား ရေး ဟာ အခု လို ကျဆင်း ခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ ” လည်း တရုတ်
နိုင်ငံ ရေး ကျွမ်းကျင် သူ ဟာဗတ် တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခ ဒယ်နီရယ် ရောစ် က ပြောသည်။
တရုတ် ၀န်ကြီးချုပ် ၀မ်ကျား ပေါင် က မမှန် ကန်သည့် အချက်အလက် များ ဖော်ထုတ် သူတွေ
ကို အရေးယူမှာ ဖြစ်ပြီး တရုတ် စီးပွားရေး ကတော့ ပုံမှန် ပဲ ဟု သတင်း ထောက် များ ကို ပြော
Real China Economic data Leak
အမေရိကန် ရင်းနှီးမြုပ် နှံ သူ ဂျော့ ဆိုရောစ် က တရုတ် ငွေကြေး တန်ဖိုး ကျဆင်း မှု သည်
စိုးးရိမ်း စရာ အခြေ အနေ ဖြစ်သည် ဟု သုံးသပ် ပြောကြားသည်။
တရုတ် နိုင်ငံ တွင် လူသုံး ကုန် ပစ္စည်း ဈေးနှုန်း များ သာ မက အခြေ ခံ စား ကုန် ဈေးနှုန်းလည်း
ဆက်လက် မြင့် တက် လျှက် ရှိသည်။ တရုတ် နိုင်ငံ တွင် ကုန် ဈေး နှုန်းများ မှာ မတ် လ အတွင်း
၅.၈ ရာခိုင်နှုန်း မြင့် တက် သွားသည်။
တရုတ် နိုင်ငံ တွင် ငွေကြေး ဖောင်းပွ မှု နှုန်းဆက် လက် မြင့် တက် နေသောကြောင့် ဟောင်ကောင်
ဂျပန် နှင့် စင်္ကာ ပူ နိုင်ငံ တို့ မှ စတော့ အညွန်း ကိန်းများ ဆက်လက် ထိုး ကျ လျှက် ရှိသည်။
ပြီးခဲ့သည့် နှစ် အောက်တိုဘာလ က တရုတ် နိုင်ငံ သည် ဂျပန် နိုင်ငံ ကို ကျော် ဖြတ်ပြီး ကမ္ဘာ့ 
ဒုတိယ စီးပွားရေး အင်အား အကြီး မား ဆုံး နိုင်ငံ ဖြစ်ခဲ့သည်။
အမေရိကန် ဒေါ်လာ နှင့် လဲလှယ် ရာတွင် တရုတ် ယွမ်ငွေတန် ဖိုး ယနေ့ ထပ်မံ ကျဆင်းသွား ပြီး
၁ ဒေါ်လာလျှင် ယွမ်ငွေ ၆.၅ အထိမြင့် တက်သွားသည့် ယခု နှစ်ဆန်း ပိုင်းက ၅.၈ မှ နေ၍ ငွေကြေး
အကြောင်းတွေက တမျိုးနှစ်မျိုးထဲ မက ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။
ငွေလဲနှုံးအခုထက် ၁၀% – ၂၀% ထပ်ကျသွားရင် ဖြစ်လာနိုင်မယ့် အကျိုးဆက်တွေကို တယောက်ယောက်ကများ ဝေဖန်ပြရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ။
ငွေမာတယ်ဆိုတာ ကက်ကင်းရိုက်ကြည့်ရင် ငါမွှေတယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်။ ဒီတော့ တစုံတယောက်သောသူ ပယောဂမကင်းဘူး။ နောက်တမျိုးအသံထွက်က ငါမြွေလို့ အသံထွက်တယ်။ မြွေဆိုတာမျိုးက သူ့ကို သွားရန်မစရင် ဘာမှမလုပ်ဘူး။ ဒါကြောင့် သူနဲ့ကင်းအောင်နေ။ ကမ္ဘာရွာကြီးမှာ ဒေါ်လှနဲ့ကင်းအောင် နေလို့မရဘူးဆိုရင် ရိပ်သာသွား တရားအားထုတ်၊ သူဈေးတက်မှ ပြန်ထွက်ခဲ့။
တရုတ်စီးပွားရေးအကြောင်းဖတ်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုအောင်ပု။
ဝမ်းနည်းရမှာလား ဝမ်းသာရမှာလား မိသိန်းကြည်လို့ပဲ ပြောလိုက်ချင်ပါတော့တယ်။
$1 = 1 MMK ဖြစ်ရင် US သွားပြီး Shopping ထွက်မယ်… :D
nature ထက် သာတဲ့လူတွေ့ပြီ။
$1 = 1 MMK ဖြစ်ရင်
ပထမဆုံး နီးနီးနားနား တရုတ်ကို သွားလည်ဖို့ ဒေါ်ဝေေ၀ကို guide ခေါ်မယ်။ (လိုက်မလိုက်က သူ့ကိစ္စ)
ပြီးရင် US သွားပြီး သဂျီးဆီက ပွိုင့်သွားတောင်းမယ်။ (တသိန်း မပြည့်ပြည့်အောင် ခုထဲက ကြိုးစားနေတာ)
နောက်ပြီး ကမ္ဘာ့ နေချင်စရာအကောင်းဆုံးမြို့တွေကိုလည်း လျှောက်လည်ချင်သေးတယ်။ ခင်မောင်ထူးရဲ့ သီချင်းထဲကလို မြန်မာပြည်က တိုးရစ်ပေ့ါ။
ကမ္ဘာပတ်လို့ ပျင်းပြီဆိုရင် ဟင်းချက်နည်းစာအုပ်တွေ ၀ယ်ပြီး တစ်မျိုးပြီး တစ်မျိုး ချက်စားမယ်။ (စားချင်တဲ့ ရွာသူရွာသားတွေ ခုကတည်းက စာရင်းပေးထားဖို့ လိုတယ်နော်။)
အင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးစားပြီးလို့ ၀ိတ်တွေ တက်လာပြီဆိုရင်တော့ အားကစားလုပ်ဖို့ စာရင်းပေးရတော့မယ်။
နောက်ထပ်ကတော့ ကုသိုလ်လေးလည်း ရသွားအောင် သဂျီးဆီက ရထားတဲ့ပွိုင့်လေးနဲ့ တွေ့ဆုံပွဲကို စပွန်ဆာပေးမယ်။
ယနေ့တရုတ်ငွေဈေးမှာ မြန်မာငွေ ၁ထောင်လျှင် 8.15 – 8.20 ပတ်ဝန်းကျင် ရှိပါတယ် ….
$ အခုဝယ်ထားရင် မြတ်မှာလား .. မြတ်ရင်ဝယ်ထားချင်လို့
ကျွန်တော်နားလည်သလိုပြောကြည့်မယ်နော်..မှားရင် ၀ိုင်းဆော်ကြပေါ့ (မတောင်းပန် လဲဝိုင်းဆော်မှာဘဲမဟုတ်လား)
ဒေါ်လာရှိတဲ့လူတွေကတော့ မကောင်းဘူးလို့ ပြောမှာဘဲ၊
ဒေါ်လာဈေးကျတာ့ ပြည်ပပို့ကုန် တွေ မပို့နိုင်တော့ဘူး
ပြည်တွင်းမှာ ကုန်စည်တွေ ပိုလာမယ်
ရောင်းမရရင် ဈေးလျှော့ ရောင်းရတော့မယ်လေ၊
ဒါဆို ပုဇွန်ထုပ်ကြီးတွေ ဈေးပေါပေါ နဲ့ ၀ယ်စားလို့ ရပြီ
ဒေါ်လာ လုပ်နေတာနဲ့ ကိုယ့်ပြည်တွင်းက ထွက်တဲ့ စားစရာတောင်
ပေါပေါလောလော မစားရတာကြာပြီ အခုမှ ၀ါးရ စားရ တော့မယ်။
ခင်ဗျားတို့ က ပြောချင်သေးလား ..“ဒါတွေ မရောင်းရရင်..
နိုင်ငံခြားငွေ မရ တော့ဘူးပေါ့” ….လို့
“ရောင်းရတော့ကော … အဲသည်ငွေတွေ ခင်ဗျားတို့ …ကျုပ်တို့…. ပြည်သူ ပြည်သားတွေ
မြင်ရ ကိုင်ရ သုံးရ စားရ လို့လား?” မေးလိုက်ချင်ပါတယ်။
ဒီတော့ ဒီအခြေအနေ ကို ကျွန်တော်တော့ ကြိုက်တယ်။
ဒေါ်လာဈေးထပ်ကျရင် ပိုတောင်ကြိုက်သေး တယ် …
လစာ မတိုးဘဲ စားသုံးကုန်တွေ ဈေးကျသွားရင်..
အခြေခံ လူတန်းစားတွေ အတွက် အကောင်းဆုံးဘဲ လို့ထင်တယ်။
လစာတိုးလိုက် ကုန်ဈေးနှုန်းက တက်လိုက် ဆိုတဲ့ သံသရာ က လွတ်နိုင်မယ် ထင်ပါရဲ့။
(ဒေါ်လာစား များ.. ကုန်သည် အမြတ်ကြီးစား များ.. ခွင့်လွှတ် နိုင်ပါစေ)
ဒါပေမယ့် အဲဒီလို စားနေရင် ကိုယ်ပြည်ထဲမှာမလုပ်နိုင်သေးတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေကင်မရာတွေ စသည် သုံးရတော့မှာမဟုတ်ဘူးနော်။
ကိုယ့်အိမ်မှာပြန်ကြည့် ပြည်တွင်းဖြစ် ဘယ်နှစ်မျိုး ပြည်ပဖြစ် ဘယ်နှစ်မျိုးလဲလို့။
သဘောက ကိုယ့်မှာပေါတာပေး ကိုယ့်မှာမရှိတာပြန်ဝယ်သုံးနေတာပါ.
ဒါမရှိရင် တံခါးပိတ်ဝါဒ ပြန်ဖြစ်သွားမှာပေါ့
ဒေါ်လာဈေးကျလို့ export လုပ်ငန်းတွေ ရပ်ဆိုင်းတာမျိုး ၊ ဆိုင်းငံတာမျိုးဆို ထောင်သောင်းပေါင်းများစွာသော အလုပ်သမားတွေ ပိတ်ရက်မှာ လစာရမှာမဟုတ်ဘူး … အဲ့ဒီအခါ ဈေးကွက်ထဲ ပေါပေါများများရနေလည်း ၀င်ငွေ မရှိလို့ မြင်သာမြင် မကြင်ရတဲ့ ဘ၀ရောက်နေလိမ့်မယ် ။
ဒီကနေ့ ဒေါ်လာဈေး ပြန်တက်တယ်လို့ သတင်းရပါတယ်။ နေပြည်တော် ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲကြောင့် ပြန်တက်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။
အခုတော့ လျောသွားပြီ အခုတော့လျောသွားပြိ……………….
မနက်ပိုင်းက တရုပ်ငွေဈေး .87
ဒေါ်လာဈေးကျတာ ကောင်းတယ် မကောင်းဘူးဆိုတာက …အောက်မှာ နည်းနည်း ၀င်ရွှီးထားတယ်။
ဥပမာ ခင်ဗျားက အစိုးရ ပြည်ပ အလုပ်အကိုင် အေဂျင်စီနဲ့နိုင်ငံခြားကို ထွက်ပြီး အလုပ်လုပ်တော့မယ် ဆိုပါဆို့ ။
ကိုရီးယားကို သွားမယ်ဆိုရင် အပြီးအစီး ၁၅ သိန်းလောက် ကုန်ကျလိမ့်မယ်။ အခု ဒေါ်လာဈေးကျတော့ ၇ သိန်းခွဲ ၈ သိန်းလောက်ပဲ
ကုန်မယ်။ ၀မ်းသာသွားသလား ? နေပါဦး။ ခင်ဗျား ဟိုကနေ အလုပ်လုပ်ပြီး ပိုက်ပိုက် ပြန်လွဲပြီ ဆိုပါဆို့ ။ သဂျီး အသံနဲ့ပြောရရင်
တရုပ်ကြီးတွေ အမေရိကန်ကြီးတွေက ခဏထားပါဦး။ ခင်ဗျားတို့ သိမလားပဲ…။ အာဆီယန် ဂိမ်းလေ….။
အဲတော့ဗျာ ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းတွေ အားလုံးက ပြည်ပကနေ တင်သွင်းရတယ်။ ဘယ်လောက် ကုန်ကျ မလဲဆိုတာ
အကြမ်းဖျင်းတွက်ကြည့်လိုက်ပါ။ ကြားရတဲ့ သတင်းတခုရှိတယ်။ ကောလဟာလလို့ ထင်ချင်ရင်ထင် ။
အဲဒါအတွက်ကို Contract ရတဲ့ ကိုယ်တော်တွေနဲ့လူဆိုးတွေနဲ့မောင်တိုင်ပင်ဆိုတာမျိုးပေါ့။
ပြည်ပကနေ ဆောက်လုပ်ရေး ကုန်ကြမ်းတွေကို တစ်ဒေါ်လာ ကို 650 ဈေးနဲ့တင်သွင်းမဲ့ Project ပါတဲ့။
ဗမာပြည်မှာ ကိုရီးယား အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းရှိတယ်ဗျာ။ သူတို့ တွေ စုပေါင်းလက်မှတ်ထိုးပြီး နေပြည်တော်ကို
စာတင်ကြတယ်တဲ့။ ဒေါ်လာဈေးကို ၇၅၀ မှာ ရပ်တန့် ပေးဖို့ ကိုပေါ့။ ဒါမှ မဟုတ်ရင် ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ အကုန်
ခင်ဗျား စဉ်းစားကြည့် ။ ဗမာပြည်က ဖိလစ်ပိုင်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဗီယက်နမ်၊ ဘင်္ဂလားဒေရှ့်နိုင်ငံတွေထက် အထူးသဖြင့် တရုပ်ပြည်
ထက် လုပ်အားခ အလွန်ဈေးပေါတယ်ဗျ။ ဟုတ်ပါပြီ။ ဒီတော့ တနေ့ တခြားဈေးကြီးလာတဲ့ လုပ်အားခတွေကို ရှောင်ရှားဖို့ ကို
ဗမာပြည်ကို ထွက်လာကြတာပေါ့။ ခက်တာက ဗမာပြည်မှာ အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ ကုန်ကြမ်းကို ထုတ်လုပ်နိုင်မှု
က ဘာမှ မရှိသလောက်ပဲ။ Carton Box, Poly Bag, Padding, Fiber Down, ဒါ မိုင်ကုန်ပဲ။ ဒါတောင် အဲဒါတွေဟာ နိုင်ငံခြားသား
ရင်းနှီးမြုတ်နှံမှုတွေပဲနော်။ ကျုပ်တို့ ဗမာနိုင်ငံသားတွေက လူပေါ်လူဇော်တွေများတော့ နိုင်ငံအကျိုးထက် ကိုယ့် အကျိုးပိုဖြစ်မဲ့
အိမ်ခြံမြေကားကျောက် ဒါနဲ့ ပဲ နပန်းလုံးနေကြတာ။ ဘာ ကုန်ကြမ်းမှ မရှိတော့ လိုအပ်တာတွေကို အပ်က အစ တင်ပို့ ပေးရတယ်။
နိုင်ငံက အရမ်းချမ်းသာနေပြီဆိုတော့ ဘာမှ ထုတ်လုပ်စရာမလိုတော့ဘူးထင်တယ်။ အကုန် ၀ယ်သုံးတယ်။ ကိုယ်က ထုတ်လုပ်ပြီး
အပြင်ကို ရောင်းစားတာ မရှိဘူး။ ပစ္စည်း တခါတင်ပို့ ရင် ဗမာပြည်ကို ရောက်တဲ့ ကြာချိန်၊ ကုန်ကျစားရိတ် တွေ….။
ဒီမှာ လျှပ်စစ်မီး ပြသာနာရှိတော့ မီးစက် ဒီဇယ်ဘိုး ၊ ဘွိုင်လာ ထင်းဘိုးတွေ…..။ ပြောမယ်ဆိုရင် အများကြီးပဲ။
အဲဒီတော့ အဲဒီ ကုန်ကျစားရိတ်တွေကို နှုတ်လိုက်ရင် တခြားနိုင်ငံတွေမှာ လုပ်ရင် ကုန်ကျတဲ့ စားရိတ်တွေနဲ့သိပ်မကွာတော့ဘူး။
ဒီကြားထဲ ပြသာနာ အရမ်းများတယ်။ ဗမာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ အတွေးအခေါ်ပိုင်း ချို့ တဲ့မှု များပြာလာတာကြောင့် အလုပ်နဲ့ ပတ်သပ်ပြီး
ပြုပြင်လို့ မရတဲ့ အရိုးစွဲမှုတွေရှိတယ်။ ပြီးတော့ Quality ဆိုရင်လဲ ဒီက တော်တော် ညံ့ဖျင်းတယ် ။ သိပ်မထူးတော့ ကုန်ကျစားရိတ်
မကွာတဲ့ အတူတူ တရုပ်ပြည် အပါအ၀င် တခြားနိုင်ငံတွေက လာပြီး လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့ သူတွေ တဖြေးဖြေး လာရင်းနိုင်ငံတွေကို
ပြန်ပြီး တပ်ခေါက်နေပြီ။ ဒီထဲမှာမှ ဗမာပြည်မှာ လုပ်ငန်းလုပ်သက် ၁၀ နှစ် အထက်ရှိသူတွေကတော့ တတ်နိုင်သမျှ တောင့်ခံပြီး
လုပ်နေဆဲပေမဲ့ အခု လက်ရှိ ဒေါ်လာဈေးနဲ့ က လက်ကျန်တွေပါ ပြေးရမဲ့ အခြေအနေကို ရောက်လာပြီ။
တခြား နိုင်ငံတွေ အနေနဲ့ က မသိပေမဲ့ ကိုရီးယားလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ဗမာနိုင်ငံသားတွေ
၆ သောင်းနဲ့အထက်မှာ ရှိတယ်။ သူတို့ ကို မှီခို နေတဲ့ မိသားစုတွေရှိတယ်။
သိပ်ရှည်နေလို့ဒီလောက်ပဲရေးမယ်။ ကောင်းလားမကောင်းလား စဉ်းစားကြည့်ပေတော့။
ဒီနေ့ ဒေါ်လာ ဈေး က $1 = 780 MMK ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီနေ့ ညနေ ပေါက်ဈေးပါ..
အထူးသဖြင့် ဗမာပြည်စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ မသာတွေက ဒီလောက်ထိစိတ်ကောင်းရှိမှာလဲမဟုတ်သလို
သူတို့က ပြည်သူ့မြေယာသိမ်း သယံစာတရှာမယ် ဒီလောက်ဘဲ
ဘေးမှာက စီပွားရေးတောင့်တဲ့နိုင်ငံတွေခြည်းဘဲ ( တရုပ်၊ ထိုင်း၊ အိန္ဒိယ၊ စင်္ကာပူ )
ဒီကငွေလှုပ်ရင် ဟိုကငွေလည်းလှုပ်မှာဘဲ ( ရွှေဈေးနှင့် အခြားဆက်စပ်ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်း )
သဂျီးတို့ရွာက လူတွေကို ငချဉ်လို့လဲ လွယ်လွယ်လေးတွက်လို့မရသေးဘူးထင်တယ်
ဆီတွေ ဆားတွေ အချိုမှုန့်တွေ ဟင်းခတ်အမွှေးကြိုင်တွေ ပေးပြီး
သူတို့ရဲ့ တရုပ်ကို ဖိုက်တဲ့ သိုင်းပြောင်းပြန်တွေလို့လဲပြောလို့မရဘူးလေ
ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးကို မာစေခြင်တာ ခိုင်စေခြင်တာ လူတော်တော်များများရဲ့ဆန္ဒပါ
ဒီလိုမျိုး ငွေလွှဲနှုန်းတွေ စွတ်တက် စွတ်ကျတာကတော့
အိုက်တိုဘဂေးဆန် တဲ့ကျုပ်က ဒီလိုအောကာင်းတွေကိုပြောရတာကလည်း
ဦးလေးကြီး တရုပ် ချယ်ရီမက တရုပ်မှာ အစိမ်း ၃၀၀၀ ။
ရွာမှာ အစိမ်း ၁၇၃၀၀ နော်။ ငွေမာတယ် ဆိုပြီး ၀ယ်စီးချင်သေးလို့ လား။ မာတာက မာတာပဲ ရှိတာလေ။
ငွေမာတယ် ပျော့တယ် ဆိုတာက ပြည်သူတွေကို တိုက်ရိုက် အကျိုးမပြူဘူးဗျ။
ပြည်တွင်းထွက် အခြေခံစားသောက်ကုန်တွေက ဈေးနှုံးခေါင်ခိုက်နေတာ တစ်ဦးချင်း ၀င်ငွေနဲ့ယှဉ်ကြည့်ပါဦး။
တလကို အ၀တ်အစား တစုံတောင် မ၀ယ်နိုင်ဘူး။ ၂ နေ့ လုပ် ၁ နေ့ စားလေဗျာ။
တက်လက်စ ကုန်ဈေးနှုံးကို နှိမ့်ဖို့ က ဘယ်လို နည်းလမ်းမှ မရှိဘူး။ အခြေခံ အနိမ့်ဆုံး လစာ ၄ သိန်းလောက် ရသင့်
နေတဲ့ လူနေထိုင်မှု စားရိတ်ဖြစ်နေပြီ။ ဦးလေးကြီးလဲ သိရဲ့ သားနဲ့ ။
ကျွန်မ အမြင်ကတော့ ကိုယ့်ငွေမာတာပျော့တာထက် ဘယ်နှုန်းမှာဖြစ်ဖြစ် တည်ငြိမ်နေရင် အားလုံးအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။အခုက ရက်ပိုင်းနဲ့ တဒိုင်းဒိုင်းကျသလို ဒီရက်ထဲပြန်တက်တော့လည်း
၁ရက်ထဲနဲ့ ၃၀–၄၀ပြန်တက်တော့ အလုပ်လုပ်ရတဲ့သူတွေ မလုပ်ဘဲ ဘဏ်တိုးသာထိုင်စားချင်စိတ်ပေါက်လာကြပါတယ်။
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေမှာဆို မနှစ်က၀ယ်တဲ့ဆေးဘောက်ချာနဲ့ ဒီနှစ်သွားဝယ်ရင်လည်းဒီဈေးဘဲ ပေးရပါတယ်။
ဒီလိုမတည်ငြိမ်တာ အပေါ်ပိုင်းက ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာ မသိရဘဲ (Transparency မရှိတဲ့အတွက်)
ကောလာဟလနဲ့ (ကောလာဟလတွေကလဲမှန်နေတတ်တော့) ရမ်းလုပ်နေကြလို့ ဒီလိုမတည်ငြိမ်တာလို့ယူဆပါတယ်။ဘတ်စကားပေါ်လုတက်ရတာ နောက်တစ်စီး ဘယ်တော့လာမလဲ မရေရာလို့ပါ။နောက် ၅ မိနစ်မှာ ရထားနောက်တစ်စီးကျိန်းသေလာမယ်လို့ သိရင်သူ့ထက်ငါ အရင်ဦးအောင် တိုးမတက်တော့ဘဲ တန်းစီစောင့်မှာပါ။
ဗြဟ္မစိုရ်တရားဟာ နောင်ရေးစိတ်မပူရမှ ပေါ်နိုင်ပါတယ်။
ဘာမှ သိပ်မပူကြပါနဲ့ ဒီထက် တက်လဲနဲနဲပေါ့ ကျ လဲနဲနဲပေါ့ ဒေါ်လာဈေးကို ချိန်နေတာလို့ ထင်တယ် အပြင်ဈေးနဲ့ အစိုးရဈေး အရမ်းကွာနေတော့ ပြင်ပက ရင်းနှီမြုတ်နံ သူတွေ ၀င်လာရင် ငွေ တဈေးထဲ ဖြစ်အောင် နဲ့
bank to bank ချိတ်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ် ထင်တယ်… ဒီ ဈေးနုံးနဲ့ ဆိုရင် တရုတ်နဲ့ ယိုးဒယားမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေ ပြန်လာနိင်တယ် မလေးရှားပါ တွက်ခြေ မကိုက်တော့ဘူး.. ကာတာ ကို သွားတဲ့ သူတွေတော့ ပြန်လာကြပြီ….ကျန်တဲ့ နိင်ငံ ရောက်နေတဲ့သူတွေ ကတော့ bank to bank ချိတ်လို့ ရရင် အစိုးရအတွက် ၀င်ငွေပိုရနိင်တယ်.. နိင်ငံခြားပစ္စည်းတွေတော့ ဈေးပေါပေါ သုံးနိင်မှာပါ (ဈေးငြိမ်ရင်)….တရုတ်က ငွေ ဈေးချပြီး စီးပွါးေ၇း ရင်နှီးမြုတ်နှံသူတွေ ကို ခေါ်တာ ကိုရီယားနဲ့ ဂျပန် က မကြာတော့မဲ့အချိန်မှာ တရုတ်ပြည်မှာစက်ရုံတွေ ထားခဲ့ရတော့မယ်လို့ ဖတ်ဘူးတယ်.. ဒါကြောင့် တရုတ်က ဂျပန်ကို စီးပွါးရေမှာ ကျော်တက်သွားတာ အမေရိကားကိုတောင် ချေးငွေနဲ့ ကိုင်လို့ရနေပြီလို့ ဖတ်ရတယ် .. ညက လင့် တင်ပေးမလို့ ရှာတာ မတွေ့လို့ .. ဟုတ်မဟုတ် သူကြီးပြောပြပါအုံး…. ငွေဈေးမာတာကိုတော့ ကျွန်တော်လဲ ကြိုက်တယ် ဒါပေမဲ့ ဒီထက်မာရင်လဲ ရင်းနှီးမြုတ်နှံ သူတွေ မလာပဲနေအုံးမယ်.. အကောင်းဆုံးမဟုတ်တောင်မှ ..အဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်ပါတယ် ကွန်ပျုတာ သမားတွေလဲ ၀မ်းသာရတော့မယ် ဖုန်းတွေလဲ ဆက်သွယ်မှု့ ဧရိယာအတွင်းဝင်နိင်တော့မှာပါ ဘယ်တော့လဲမသိဘူး ဂြိုလ်တု တလုံးလွတ်တင်တော့မယ် ဒါက စီးဂိမ်း မတိုင်ခင်ဖြစ်ဖို့များတယ်….ဒေါ်လာငွေ ၀ယ်ရောင်း ကစားတဲ့ခောတ် ကုန်တော့မယ်….. ဒါတွေ က ကျွန်တော့်အမြင်ပါ..
အခုညမှာတော .တစ်ရုပ်ငွေ8.1 ဖြစ်နေပါတယ်